January 12, 2020 Magic Uncategorized 0
၁.ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ကွင်းလယ်ပိုင်းအတွက် အားဖြည့်ဖို့ စီစဉ်နေပြီး အေဂျက်စ်ကွင်းလယ်လူ ဗန်ဒီဘိခ်ကိုလည်း ချိတ်ဆက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Express သတင်းဌာနကတော့ ယူနိုက်တက်ပစ်မှတ် ဗန်ဒီဘိခ်ဟာ ယူနိုက်တက်ထက် လက်ဦးနေတယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပြီး စပိန်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက် ၈၀ % လောက်အထိ သေချာနေတယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
၂.ယူနိုက်တက်က ခေါ်ယူဖို့ နီးစပ်နေပြီလို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့ စပို့တင်းကွင်းလယ်လူ ဖာနန်ဒက်စ်ကို စပါးအသင်းက ခေါ်ယူဖို့ ဆွေးနွေးလာတယ်လို့ Daily Star သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပေါ်တူဂီသားကို စပါးအသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီက အသင်းထံခေါ်ယူူဖို့ အနီးစပ်ဆုံးအနေအထားမှာ ရှိခဲ့ပေမယ့် စပို့တင်းနဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေး ညှိမရတာကြောင့် ပျက်ပြယ်ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃. Metro သတင်းဌာနကတော့ မန်စီးတီးအသင်းဟာ အက်စတွန်ဗီလာကွင်းလယ်လူ ဂရီးလစ်ချ်ကို ခေါ်ယူရေးတိုက်ပွဲမှာ ပါဝင်လာခဲ့ပြီလို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအသက် ၂၄ နှစ်သားကို မြို့ခံပြိုင်ဘက် ယူနိုက်တက်ကလည်း ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေပြီး စီးတီးကတော့ ယူနိုက်တက်နဲ့ အပြိုင်ခေါ်ယူဖို့ ပြင်ဆင်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄.ယူနိုက်တက်အသင်းကင်းထောက်တွေဟာ တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်က ပြင်သစ်မြေက လိုင်လီကွင်းလယ်လူ ဆိုမာရေးစ်ရဲ့ ခြေစွမ်းကို သွားရောက်အကဲခတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ သတင်းတွေက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Express သတင်းဌာနကတော့ နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားဟာ စပို့တင်းကွင်းလယ်လူ ဖာနန်ဒက်စ်ကို မခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပါက လိုင်လီကွင်းလယ်လူကို ခေါ်ယူဖို့ တောင်းဆိုထားတယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
၅. ယူနိုက်တက်ဟာ ကွင်းလယ်ပိုင်းလိုအပ်ချက်အတွက် ကွင်းလယ်ကစားသမား တော်တော်များများကို ချိတ်ဆက်နေပြီး ဂျူဗင်တပ်စ်မှာ နေရာမရဖြစ်နေတဲ့ လီဗာပူးကွင်းလယ်လူဟောင်း အမ်မရီချန်ကိုလည်း ခေါ်ယူဖို့ ပစ်မှတ်ထားနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အီတလီအခြေစိုက်ကျူတိုသတင်းဌာနကတော့ အမ်မရီချန်ဟာ အသင်းဟောင်း လီဗာပူးကို လေးစားမှုရှိတာကြောင့် ပရီးမီးယားလိဂ်ကို ပြန်လာဖွယ်မရှိဘူးလို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
နောဝစ်ချ်ကို ဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက် ယူနိုက်တက် တာဝန်ရှိသူတွေကို ဆိုးလ်ရှား ကာကွယ်ပြောကြား
နောဝစ်ချ်အသင်းကို ဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့ပွဲ မှ မန်ယူနိုက်တက်အသင်းသားများရဲ့ Ratings များ